Ebili mmiri oyi na Spain: obodo niile dị na njikere belụsọ Canary Islands | Netwọk Mgbasa Ozi
Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe gbasara ihu igwe
Mgbanwe ihu igwe
Oyi oyi na Spain: obodo oyi kpọnwụrụ (belụsọ Canary Islands)
Monica sanchez | | Ebili mmiri oyi, Amụma
Ndị mmadụ nọ na Bunyola, na Serra de Tramuntana (Mallorca).
La ebili mmiri na anyị na-ebi n'oge ahụ na Spain na-ahapụ snow na ọkwa dị ala dị ala na ebe ihe omume a anaghị emekarị, dị ka ọtụtụ n'ime Balearic Islands na obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri Mediterenian.
Taa, Wenezdee, Jenụwarị 18, ọtụtụ obodo dị na njikere maka ọnọdụ okpomọkụ dị ala, ikuku na snowfall.
1 Eburu amuma maka taa Jenụwarị 18
1.3 Oke osimiri
2 Eburu amuma maka echi, Jenụwarị 19
2.3 Oke osimiri
Eburu amuma maka taa Jenụwarị 18
Foto - AEMET
N'ụbọchị a a na-atụ anya ọnọdụ okpomọkụ nke ruru ogo iri na abụọ n’okpuru efu na isi nke Aragon, Pylannes Catalan, Albarracín, Jiloca, Gúdar, Maestrazgo na Iberian Zaragoza. N'ógbè Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria na Zamora, ha nọ na njikere oroma maka okpomọkụ n'etiti -10 na -11ºC. Na Palencia, Salamanca na Valladolid enwere ịdọ aka ná ntị odo maka frosts n'etiti 6 na 9 ogo n'okpuru efu.
Agbanyeghị na ọkwa igwe ga-adị taa n'etiti 0 na 300 mita, enwere ịdọ aka ná ntị maka snow na Almería na ndịda ọdịda anyanwụ Murcia.
N’ógbè Mediterenian nakwa n’agwaetiti Balearic oké osimiri ga-anọgide na-nnọọ ejighị n'aka, site na ifufe ugwu ugwu na oge nke ike 8, nke ga-akwado nhazi nke ebili mmiri ruo mita 5 n'ịdị elu.
Eburu amuma maka echi, Jenụwarị 19
Obodo ndị dị n'akụkụ ugwu nke peninshula ahụ, tinyere ndị dị n'ụsọ Oké Osimiri Mediterenian, ga-amụrụ anya n'ihi ọnọdụ okpomọkụ nwere ike iru -15ºC na isi nke Pyrenees na usoro Iberian. Na mpaghara nke ime peninshula, okpomọkụ nwere ike ọ gaghị ebili karịa 5ºC, ebe na mba ndị ọzọ, a na-atụ anya ihe karịrị 15ºC na Mediterenian na ruo 20'C na agwaetiti Canary, nke ebili mmiri emetụtaghị nke oyi.
Banyere ihe egwu snowfall, Albacete, Murcia, Almería, Alicante na Valencia ga-anọ na njikere edo edo.
Maka echi ọnọdụ ga-amalite ịdị mma na Balearic Islands, nke ga-anọgide na nche, oge a na-acha odo odo n'ihi ifufe na oké osimiri nwere oke ebili mmiri nke mita 2-3. Na oke osimiri Mediterenian ọnọdụ ahụ ga-adị mgbagwoju anya, ọkachasị n'ụsọ osimiri Valencian n'ihi oke ifufe na ebili mmiri nke nwere ike iru mita ise.
Ọnọdụ a ga-agbadata rue Jenụwarị 20. Enwere obere 🙂.
Ọdịnaya nke isiokwu agbaso ụkpụrụ anyị nke ụkpụrụ nduzi. Kpesa mmejọ pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri oyi » Oyi oyi na Spain: obodo oyi kpọnwụrụ (belụsọ Canary Islands)
Ị nwere ike inwe mmasị
Bụrụ onye mbụ ịza ajụjụ
Hapu okwu gi Kagbuo azịza
Adreesị email gị agaghị bipụtara. Chọrọ ubi na-akara na *
Ana m anabata okwu nzuzo *
Rụ ọrụ maka data: Miguel Ángel Gatón
Nzube nke data: Nchịkwa SPAM, njikwa okwu.
Ikike: Nkwenye gị
Nkwurịta okwu nke data: Agaghị agwa ndị ọzọ data ahụ ma ọ bụghị site na iwu.
Nchekwa data: Ebe nchekwa data nke Occentus Networks (EU) kwadoro
Ikike: Oge obula inwere ike igbachi, weghachite ma hichapụ ihe omuma gi.
Achọrọ m ịnata akwụkwọ ozi
Kedu ihe bụ snap oyi?
Akụkọ na email gị
Nweta ozi niile gbasara ihu igwe na email gị.
Akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị
Akwụkwọ akụkọ kwa izu
Anabatara m ọnọdụ iwu
Nhazi na ọmụmụ ihe
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Akụkọ Mgbasa Ozi
Bụrụ onye ndezi